audio ဗီဒီယိုအရောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » ဂျော့ဘ် » audio ဗီဒီယိုအရောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: audio ဗီဒီယိုအရောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်
ကုမ္ပဏီ: ချိုင့်ဝှမ်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ, Inc မှ
ကျနော်တို့လက်ရှိအသံ / ဗီဒီယိုအရောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း
audio / ဗီဒီယို အရောင်းအင်ဂျင်နီယာများ ကျနော်တို့များကိုနည်းပညာများအတွက် key ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးနှင့်ထောက်ခံသူများအဖြစ်အရောင်းနှင့်အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တာဝန်ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို အရောင်းအင်ဂျင်နီယာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျနော်တို့ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာဖောက်သည်များကိုနည်းပညာ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အားနည်းချက်များတို့အကြားနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ တစ်ခုချင်းစီကို အရောင်းအင်ဂျင်နီယာ တိုင်းစီမံကိန်းကိုသံသရာတစ်လျှောက်လုံးခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း, ပြည့်စုံဖောက်သည်အရောင်းအပေါငျးတို့သအဆင့်ဆင့်ကတဆင့်စိတ်ကျေနပ်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအာမခံဖို့အားလုံးကိုနည်းပညာပိုင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ အရောင်းအင်ဂျင်နီယာများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အကြီးစားဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် display ကိုစနစ်များ, conferencing ဖြေရှင်းနည်းများ, စွမ်းဆောင်ရည်သံကိုစနစ်များ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်စတူဒီယိုအပါအဝင်အရောင်းနှင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များအကြားဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ထို့ထက် ပို. ။
အရောင်းအင်ဂျင်နီယာများ မကြာခဏ pre-အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအခြားအအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူတိုင်ပင်, အိမ်နှင့်အဝေးထိန်းစနစ်ရောင်းအားအဖွဲ့များနှင့်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာအသင်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. နှစ်ဦးစလုံးအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အရောင်းအင်ဂျင်နီယာများ အင်ဂျင်နီယာဌာနအတွင်းအရောင်းအင်ဂျင်နီယာ Manager သို့သတင်းပို့သည်။
အောင်မြင်တဲ့ အရောင်းအင်ဂျင်နီယာ ရပါမည်:
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အ In-လူတစ်ဆက်သွယ်ရေးသရုပ်ပြပါ။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်:
Non-နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ clients များနားလညျနိုငျတဲ့နညျးနဲ့ pre-ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဏဦးစီးနည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ဆွေးနွေးမှုများ။
သငျ့လျြောသောအကောင်အထည်ဖော်ရန်အရောင်းဌာနများ post မှဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုသယ်ဆောင်ဏ။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ပို့ကုမ္ပဏီ profile များကိုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အကျဉ်းချုပ်အပါအဝင်အဆိုပြုချက်, သူတို့သည်ဒီဇိုင်းများမှပြောပြတယ်အဖြစ်နားလည်ရန်လွယ်ကူသောအဖုံးအက္ခရာများနှင့်အချုပ်စာရွက်စာတမ်းများသောင်မတင်ဏ။
ကျမ်းစာ၌ရေးထားတုံ့ပြန်မှုအတွက်အားကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုဝင်စားနှင့်အထက်ဖော်ပြထားကဲ့သို့စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြသည့်အခါများနှင့်ပညာရှင်ပီသစွာအမြဲ one's-မိမိကိုယ်ကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်: ဒီပီသသောနှင့်လိုအပ်သောလက်ဆောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စားဆင်ယင်ဖြစ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းစည်းဝေးကြီးများ, codes တွေကို, အတွေးအခေါ်များ, ဒါမှမဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် device ကိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောဘာသာရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သုတေသန, သင်တန်းပေးခြင်း, သို့မဟုတ်အခြားဆက်လက်ပညာရေး၏လိုက်စားမှတဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ကြီးထွားဖို့စိတ်အားထက်သန်သရုပ်ပြပါ။
အချိန်ဇယားဆွဲပြက္ခဒိန်နှင့်အချိန်-စာရွက်နှစ်ဦးစလုံးမှတဆင့်သတင်းပို့၏တသမတ်တည်းအချိန်မှန်နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသရုပ်ပြပါ။ အင်ဂျင်နီယာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး, site ကိုလည်ပတ်မှု, လယ်ပြင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အလုပ်အကိုင်အပိတ်ပွဲများအတွက်ရောင်းချမှုနယ်မြေတစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားစဉ်ဤ-site ကိုချွတ်အချိန်ပါဝင်သည်။
လိုအပ်သောအဖြစ်ညနေပိုင်းနှင့်တနင်္ဂနွေအပါအဝင် Non-ရိုးရာအလုပ်နာရီ, ကျင်းပရန်စွမ်းရည်။
ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာတတ်လွယ်ခြင်းအတွက်သက်သေတွင် track record နှင့်အတူ Self-လှုံ့ဆော်ခြင်းရှိကြလော့။
, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖွဲ့စည်းနှင့်သပ္ပါယ် / ဖန်တီးမှုချဉ်းကပ်မှုမှတဆင့်အတားအဆီးဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါစေ။
တစ် Cory နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများရှောက်သွားနိုင်စွမ်း။
post-secondary ဒီဂရီသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရောင်းအားသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံထက်ပို3နှစ်ပေါင်း
post-secondary ဒီဂရီသို့မဟုတ် AV ဒီဇိုင်း, အင်ဂျင်နီယာ, ဒါမှမဟုတ်ထုတ်လုပ်မှု၏လယ်ပြင်မြင့်မားဆက်စပ်။
ထိုကဲ့သို့သော CTS အဖြစ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသက်ဆိုင်ရာအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်, သို့မဟုတ်အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူတိကျတဲ့အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်
ချိုင့်ဝှမ်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ, Inc အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့, ထိရောက်ကောင်းမွန်စွာပြေးနှင့်အမြတ်အစွန်းအဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့သွားလာရင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်အရင်းအမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က,, ကိုယ်ကျင့်တရားကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ, ငါတို့ဖောက်သည်များအတွက်မြင့်မားသောလမ်းအင်ဂျင်နီယာယူပါ။
ကျနော်တို့လက်ရှိအသံ / ဗီဒီယိုအင်ဂျင်နီယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း
audio / ဗီဒီယို အင်ဂျင်နီယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ကုမ္ပဏီတခြားဒေသများနှင့်အတူကြောင့်အသင်း၏ interface ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အင်ဂျင်နီယာအသင်းအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ဒီဇိုင်းနှင့်စုဆောင်းရန်ရောင်းအားအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အခြားဌာနများမှချိတ်ဆက်ခြင်းအပြောင်းအလဲများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုသတင်းအချက်အလက်စုစည်းရန်။
အင်ဂျင်နီယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အခြားအအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူမကြာခဏအနီးကပ်, ရွယ်တူများ၏ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည်အတွက် In-အိမ်သူအိမ်သားအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အင်ဂျင်နီယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အင်ဂျင်နီယာဌာနအတွင်းအင်ဂျင်နီယာများ၏ဒါရိုက်တာမှသတင်းပို့ပါ။
အောင်မြင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရပါမည်:
ပစ္စုပ္ပန် one's-မိမိကိုယ်ကိုခပ်သိမ်းသောကာလပညာရှင်ပီသစွာ: ဒီပီသသောနှင့်လိုအပ်သောလက်ဆောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စားဆင်ယင်ဖြစ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သည်။
တူညီသောအခွင့်အရေး Equal Opportunity အလုပ်ရှင်
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-04-28
ယခင်: အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ (Entry Level)
နောက်တစ်ခု: Ericsson က UDN တရုတ်စားသုံးသူတွေမှဝင်ရောက်ခွင့်ချဲ့ထွင်